For Men Wash
Sukin For Men Facial Scrub လေးကို Aloe leaf, sesame seed oil, Bambo extract, Coconut oil, Jojoba oil, Cucumber extract, Vitamin E, Lime oil, Pepper seed oil စတဲ့ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားလို့ ?
? ချွေးပေါက်တွင်းက အညစ်တွေ 100% သန့်စင်ပေးတယ်
? ဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားပေးပြီး အဆီဖုတွေထပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်
? ကြမ်းပြီးခြောက်နေတဲ့အရေပြားကို အစိုဓါတ်ထိန်းပေးပြီး ချောမွတ်စေတယ်
? အသားအရောင်ညီပြီ ကြည်လင်လန်းဆန်းတယ်
? တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်လေးသုံးပေးရင် အဆီဖုဝက်ခြံထွက်တာတွေသိသိသာသာသ က်သာပြီး Healthy skin ဖြစ်စေပါတယ်
အသုံးပြုနည်း - မျက်နှာကိုအရင်ရေစွတ်ပါ ပမာဏအသင့်တင့်ယူပြီး မျက်နှာအနှံ့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပေးပါ။ ( အနည်းဆုံး တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ် သုံးပေးပါ )